> Resource > Mac > Top 5 Mac Data Recovery Software
Ma jiro qof uu jecel yahay in dhibaato ay ka soo badiyay muhiim ah ka qalab computer ama kaydinta Mac sida drive dibadda adag, camera digital, kaadhka xusuusta, USB drive, iwm Haddii aad tahay nasiib, waxaad yeelan doontaa in ay soo kabsadaan xogta Mac ka Time gurmad Machine . Haddii kale, waxaad u baahan doontaa caawimo ka kalsoonaan karo Mac software kabashada xogta.
Tan waxaa jira barnaamijyo xoomey kabashada xogta Mac ee internet-ka, waa shaqo ay si sahlan users Mac in ay doortaan mid ka mid ah kuwa ugu haboon oo aan. Waxaan soo bandhigi doonaa 5 codsiyada fududahay in la isticmaalo ugu awooda badan iyo sidoo kale in aad ka dooran karto.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka heli kartaa si dhib leh barnaamij gebi ahaanba bilaash ah Mac-kabashada xogta, iyo dhan 5 qalab kabashada xogta Mac in liiska u baahan tahay in la siiyo.
Top 5: buugan Ladnaansho (Mac)
Top 4: Xogta Rescue 3
Top 3: Recovery File AppleXsoft u Mac
Top 5: buugan Ladnaansho (Mac) ($ 59 ugu yaraan)
Created si ay u xaliyaan arrimaha khasaaro xogta dadka isticmaala Macintosh, buugan Ladnaansho (Mac) waa codsi ah siisaa wax kasta oo u badan dadka isticmaala guriga u baahan yihiin: interface fududahay in la isticmaalo, noocyada file badan iyo sidoo kale qalabka warbaahinta ay taageerayaan. Aqoon hore No loo baahan yahay, sababtoo ah interface saaxir ah buugan uu soo kabsan (Mac) daryeeli doona wax kasta oo aad u.
Waxaa tahay Currently 3 koob ee buugan Ladnaansho (Mac) ee isticmaala Mac uu ka soo xusho. Tani waxay sidoo kale waa soohdinta dhanka xun ee qalabka. Caddadka aasaasiga ah, oo ay sidoo kale waa mid ka mid jaban, kaliya saamaxaya kuwa isticmaala inay ka soo kabsadaan files tirtiray ka Mac drive ama faylasha weelna Trash.
Haddii aad rabto in aad hesho Edition Pro, taas oo aad bixisaa hawlaha ugu badan ka soo kabsaday videos in laga badiyay / tirtiray kabashada xijaab, waa inaad bixiso $ 179.
1 u fududahay in la isticmaalo interface, taas oo u wanaagsan dadka isticmaala caadi ah;
2 Waxaad xulan kartaa ceshan nooc oo kala duwan oo la file Iyo Saxeexooda u gaar ah;
2 In kastoo aasaasiga ah Edition ayaa hawlaha yar, $ 59 ayaa weli la aqbali karo.
1 ma waxaad ka heli karo hawlaha badankooda la aasaasiga ah Edition, iyo $ 179 waa mid aad u qaali ah;
2 ma uu awoodi doono inuu ka soo kabsado files warbaahinta sida sawiro, Cajalado iyo videos la aasaasiga ah Edition waxaad ka. Haddii aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado warbaahinta la buugan bogsii, waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan $ 10 in ka badan aasaasiga ah Edition;
3 ma noqon doonaa inaad awoodo inuu ka soo kabsado xogta ka drive ah hallaysay buugan Ladnaansho (Mac).
Hel buugan Ladnaansho (Mac)
Top 4: Rescue Data 3 ($ 99)
Rescue Data 3 bixisaa users fursadaha ugu fiican ee soo kabsaday tirtiray ama laga badiyay dhaawacan ama caadi drives adag iyo sidoo kale warbaahinta kale. Waxa uu baaritaanku aad Macintosh si fiican u kaxayn la habka awood caayaan oo uu baaritaanku qeyb kasta oo aad drive.
1 iskaanka xoogbadane aad hubisaa in fursad weyn si aad u hesho xogta ka luntay;
2 3 fursadaha iskaanka laga heli karaa: scan deg deg ah, tirtiray scan file, scan dheer,
3 Marka loo eego ka kale software kabashada xogta Mac ee suuqa, Data Rescue 3 kuu ogolaanaya in aad nuqul drive ah waxyeelo si ay halkii iskaan karaa drive Gadzhiyev oo ah, ka dibna waxa aad yeelan doontaa in ay soo kabsadaan xogta ka drive Gadzhiyev oo ah.
1 Mararka qaar ma aad yeelan doontaa in ay ku eegaan helay xogta. Waxaad la doonaa gaar ahaan wareersan marka files recoverable aan la previewed karo;
2 interface waa in yar oo ah mid adag.
Hel Rescue Data 3
Top 3: AppleXsoft Recovery File u Mac ($ 99.95)
Recovery File AppleXsoft u Mac waa barnaamij sahlan laakiin wax ku ool ah Mac-kabashada xogta.
Recovery File AppleXsoft u Mac bixisaa ma-gaar ah Mac-xirfad-baahan yahay interface in dadka isticmaala Mac inuu ka soo kabsado xogta lumay ka tirtiray, lumay, la kharribtay, formatted qoruhu Mac. Waxaa soo kabsado mugga unmounted, files si qalad ah tirtiray iyo fayl, drive initialized, macquul nidaamka file drive burburay, iyo sidoo kale dib ugu badiyay weeraro.
1 Waxay bixisaa xalal aad soo kabashada xogta Mac dhamaystiran oo ay howlgal fudud;
2 Its nidaamka dhirta file iyo raadinta sida diirada sahlay inay kaa caawiyaan inaad hesho files lumay si fudud;
3 Hardware weerar iyo weerar soo kabashada Software waxaa laga heli karaa;
4 nidaamka file Multiple taageeray, baruurta, exFAT, NTFS, HFS +, ISO 9660, EXt2 / 3;
5 hawlaha dheeraadka ah waxaa lagu daray barnaamijka: tirtiro xogta, Baadhista disk iyo qalab disk.
1 Waxaad awoodi kartaa oo kaliya sawiro Falanqeynta la Recovery File AppleXsoft;
2 xawaaraha iskaanka waa in yar oo gaabis ah;
3 ma noqon doonaa in aad awoodid in aad ku darto noocyada file caadadii in filter file raadinta.
Hel Recovery File AppleXsoft u Mac
Wondershare Data Recovery for Mac Caawisaa dadka isticmaala Mac inuu ka soo kabsado xogta Mac & iPhone lumay.
Waa Mac samatabbixiye xogta si dhakhso ah, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo dadka isticmaala Mac. Waxaa dib u soo ceshano video lumay, sawiro, dokumentiyo emails, iyo files archive ka mid adag drive Mac-ku-saleysan ama drive dibadda adag, USB drive, kaarka SD, camera digital, telefoonka gacanta. Mar kasta oo aad files Mac lumay ay sabab u tahay takhalusid shil ah, formatting, jeermiska fayraska, howlgal aan habboonayn, oo lama filaan ah failure awood, iyo sababo kale oo aan la garanayn, Wondershare Data Recovery for Mac noqon kartaa saaxiibkaa ugu fiican.
1 No interface xirfad loo baahan yahay gaar ah ka dhigaysa Wondershare Data Recovery for Mac Ololaha Nolol ah ee dhammaan noocyada kala duwan ee isticmaala Mac;
2 3 hababka Recovery ayaa diyaar u ah dhammaan noocyada kala duwan ee xaaladood khasaaro xogta: kabashada file lumay, file cayriin soo kabsado iyo soo kabashada xijaab
3 Wondershare Data Recovery for Mac kaloo ka caawisaa dadka isticmaala iPhone inuu ka soo kabsado photos lumay, SMS, xiriirada iyo noocyo badan oo file kale ka Lugood gurmad file on Mac;
4 awood u eegis Gaarka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku eegaan sawirada, waraaqaha, emails, files txt, iyo sidoo kale dhageysto qaar files audio iyo daawato videos qaar ka mid ah;
5 Waxaa soo kabanayo files ma ahan oo keliya laakiin aan xijaab oo dhan la-dhismeedka buugga iyo file magacyada asalka ah;
6 Waad joojin kartaa habka iskaanka mar kasta files yihiin ogaado, iyo sidoo kale natiijada badbaadin iskaanka waqtiga xiga.
1 ma Waxaad ku rakiban kartaa barnaamijka on mugga asalka xogta lumay aad si looga fogaado in xogta overwritten;
2 In dhinac ka mid ah, iskaanka codsiga waa mid aad u awood badan in xitaa aasaasey file kasta kaydin doono web ka siiyaa biraawsarkaaga waxa uu ku yaalaa iyo files xitaa musuqmaasuq oo dhaawacan.
Hel Wondershare Data Recovery for Mac
Alsoft DiskWarrior waa barnaamij soo kabashada xog gaar ah Mac in kabsado iyo badalay buugga asalka isticmaalaya awood badan technology patent-sugayo. Maxaa ka dhigay waxa ay si gaar ah waa in aad xataa ku rakibi kartaa drive Downlaods dibadda Mac-ku salaysan inuu ka soo kabsado xogta lumay ka Mac. Tani waa run ahaantii weyn, maxaa yeelay, wuxuu idin siin doonaa macquul ugu si looga fogaado in xogta overwritten. Waxaa xitaa awoodin inuu ka soo kabsado xogta laga fashilmay Macintosh drive.
1 Users waxaa loo ogol yahay si loo soo dajiyo barnaamij ku saabsan drive dibadda;
2 noqon doonaa inaad awoodo inuu ka soo kabsado fashilmay Macintosh drive sidoo kale;
3 Waxay leedahay interface ugu user-friendly ee liiska ah,
4 Barnaamijka waxaa aad bixisaa qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah oo aan ka ahayn soo kabashada xogta, sida iswada, rukhsadda dayactir disk.
1 In kastoo barnaamijka waa u fududahay in la isticmaalo, waa ay adag tahay si loo soo dajiyo iyo qotomiyey,
2 iskaanka wuxuu qaadanayaa wax yar ka sii dheer tahay oo kale Mac software kabashada xogta.
Dhamaan 5 Mac software kabashada xogta ee liiskaan ku jira waxtar leh oo xoog badan. Waxaa kale oo aad u dooro mid ka mid ah ugu fiican in la isticmaalo.
Aragtidayda, ugu fiican Mac xal kabashada xogta waa si joogto ah gurmad aad files muhiim ah. In kastoo aad leedahay biilasha lagu kalsoonaan karo soo kabsado, soo kabashada ma aha 100% oo run ahaantii waxa aad kharash lacag badan!
Siduu u insignia fiidiyo Video Recovery